Sosialy Archives - Page 100 sur 150 -
“Centre Vonjy ” ao Nosy Be : Hiaro ireo zaza iharan’ny herisetra
31/07/2017 admintriatra 0
Ambony dioa ambony ny tahan’ny herisetra izay mihatra amin’ ireo zaza sy ny vehivavy raha ny salan’ isa voaray ao amin’ny faritra Diana no jerena. Miisa 1113 ny isan ‘ny tranga ary 34 ny tranga …Tohiny
Fahapotehan’ny aty : 48 tapitrisa Ariary ny fitsaboana ny hepatita
29/07/2017 admintriatra 0
Tato ho ato dia nalaza indray ny aretina hepatita, izay fieretan’ny aty vokatry ny fahatongavan’ny tsimokaretina ao anatiny. Araka ny nambaran’ny sampan-draharahan’ny firenena mikambana na ny Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dia anisan’ny aretina …Tohiny
Faritra Analamanga : Nanome fitaovana ny zandarimaria
28/07/2017 admintriatra 0
Tanteraka ny fanamby napetraka. Mba ho fiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana ary ho fanampiana ny zandarimariam-pirenena eo amin’ny faripiadidian’Analamanga, nitondra fanampiana ho azy ireo ny avy eo anivon’ny Faritra Analamanga tarihin’ny lehibeny, Ndranto Rakotonanahary. Araka izany, …Tohiny
Fetim-pirenena : Atao etsy amin’ny Esca Antanimena ny « Arendrina 2018 »